पशु कल्याणकी अभियान्ता प्रमदा शाह
classickhabar २०७४ असार १५ बिहीबार प्रकाशित
देशमा अधिकारको आन्दोलन चल्न थालेको दशकौ भइसकेको छ । तन्त्रका आन्दोलन, अधिकारका आन्दोलन निकै भए । प्रजातन्त्रका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा त कहिले गणतन्त्रका नाममा । मान्छेको अधिकारको आन्दोलनको बारेमा यहां वारम्वार चर्चा हुन्छ, मानवजातिको कल्याणको कुरा पनि निकै हुन्छ , प्रश्न उठछ के यो व्रमाहण्डमा मानवजाति वाहेक कल्याण गरिनुपर्ने , अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने अरु कोहि नै छैन त ? निसन्देह छ नि पशंपुक्षीको कल्याणका लागि निरन्तर वहस पैरवी गर्दै आएकी एनिमल नेपालकी अध्यक्ष प्रमदा शाह भन्छिन् । हजुरबुबा देखि बुबा मम्मी पशुपंक्षीप्रेमी हुनुहुन्थ्यो । उनको पशुपंक्षीसंगको प्रेम भने बालापनदेखिकै हो । मेरो घरमा पशुपंक्षीप्रति क्रुरता भन्ने मैले कहिले पनि पाइन । मेरो पशुप्रेम पारिवारका अग्रजवाट सिकेको संस्कार हो । शाह कसरी पशुपंक्षीको कल्याणका काममा आकर्षित भइन त ? उनी भन्छिन्, म सानैदेखि नै पंशुपक्षी प्रमी मान्छे हुं । यो जेनेटिक पनि हुन सक्छ । मैले मेरो पशुपंक्षीप्रतिको प्रेमलाई किन ममा मात्र सिमिति राख्ने, यसलाई आन्दोलनकै रुपमा किन नबढाउने ? उनले सोचिन अनि लागिन संस्था स्थापनातर्फ , दर्ता गरिन लाईक माइन्डेड संग मिलेर एनिमल नेपाल । उनी रोटरियन पनि हुन, रोटरी क्लव अफ मञ्जुश्रीकी पास्ट प्रेसिडेन्ट । रोटरीमा लाग्दा सेवालाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्छ भनेर रोटरियन भईन । उनले नेपालमा पंशुपक्षीको कल्याणको कामलाई संस्थागत रुपमै अगाडि बढाउनका लागि २००८ मा एनिमल नेपाल शुरु गरिन ।
विशेषत नेपाली भन्दा बाहिरवाट नेपाल आएका विदेशी पशुपंक्षीको कल्याण र अधिकारप्रति संवेदनशिल पाएको उनी बताउंछिन् । उनको पशुप्रेमलाई ति विदेशीको कामले झनै उत्साह थप्यो उर्जा दियो । नेपालमा भएका हरेक पशुपंक्षीको आवाज बन्ने अटोठ छ उनको अनि उनको संस्था एनिमल नेपालको । अहिले पशु कल्याणको वहस पैरवी गरिरहेको छ ऐनिमल नेपालले । अधिकारको कुरा त अलिक पछिको कुरा हो । अधिकारको कुरा नेपालमा अहिले नै गर्दा हामीलाई नै पागल भन्न बेर लगाउदैनन । पशुअधिकारले कुनै पनि प्रयोजनका लागि पशुबधलाई निषेध गर्ने कुरा गर्छ । पशुलाई बध नगर , माछामासु नखाउं भन्छ , अहिले नै यो अभियान छेडदा सफल नभइएला कि भन्ने पनि छ , तर अन्तत एनिमल नेपालले ऐनिमल राइट्सको विषयमा पनि अभियान छेडनेछ , उनले भनिन तर समय लाग्छ जनावरलाई बन्दी नबाउनुस, घरमा पालेको नाममा बन्दी बनाउनु पशुकल्याण र अधिकारको मर्म विपरित छ ।
पशुपंक्षीको पनि मन हुन्छ, संवेदना हुन्छ, पिडा हुन्छ । पशुपक्षीलाई बुझ्नुस । एनिमल नेपाललको अभियानले जागरणको काम , कल्याणको काम काफी मात्रामा गरेको उनको दावी छ । राजनीतिक दलले पनि सवैको कल्याणको अनि अधिकारको कुरा गरे तर जनावरको विषयमा उनीहरुको घोषणापत्र मौन देख्दा प्रमदालाई दुख लाग्छ । तर उनी निराश छैनन, जति बुझाउदै गयो, उनको अभियानप्रतिको आकर्षण देखेर उनलाई खुशी पनि लाग्छ । नयां संविधान पनि पशुपंक्षीको अधिकारका सन्दर्भमा अनुदार देखियो । संविधानमै पशुकल्याण र अधिकारको कुरालाई लिपिवद्व गर्नका लागि प्रमदा र ऐनिमल नेपालले पहल नगरेको होइन तर सभासदहरुले यसलाई खास चासो दिएनन, प्रमदाको अनुभूति छ । अहिले ऐनिमल नेपाल सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गर्छ,समुदायमै गएर पनि सामुदायिक कुकुरको उपचार गर्छ , अहिले विशेषत ललितपुरमा केन्द्रित छ संस्था ।
राज्य विस्तारै उदार हुदै गएको छ । कामदार जनावरको लागि भनेर पशुकल्याण निर्देशिका आएको छ । अव त्यो ऐनका रुपमा रुपान्तरण हुन समय लाग्ला , कुनै दिन हुन्छ भन्ने विश्वास प्रमदालाई छ । पुशपंक्षीसंग सम्बान्धित मन्त्रालय एवं निकायका अधिकारीहरु अहिले पशुपंक्षीका अधिकारप्रति संवेदनशिल बन्न थालेको प्रमदा बताउंछिन् । इट्टाभट्टामा भएका कामदार जनावरको कल्याणको काम पनि गरिरहेको छ ऐनिमल नेपाल । खच्चर, घोडा, गदाहा, कुकुर जस्ता पशुपँक्षीको केयर गर्ने काम अहिले ऐनिमल नेपालले गरिरहेको छ । अहिले राजधानी केन्द्रित छ संस्था अनि अभियान । यसलाई राज्यकै तर्फवाट राष्ट्रिय विशेष अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन सकियो भने अझ राम्रो हुने प्रमदाको तर्क छ ।
संस्थासंग सिमित स्रोत हुन्छ, चाहेजसरी अभियान छेडन सकिदैन र पनि एनिमल नेपाल हिम्मत हारेको छैन् । प्रमदा अनि ऐनिमल नेपालसंग पशुकल्याणका लागि चाहिएजति मन छ , इच्छाशक्ति छ, संकल्पशक्ति छ । असल कामका लागि चाहिएजति जाँगर पनि छ । पुशकल्याणको पक्षमा माहोल बनाउन, नीति निर्माणका लागि दवाव दिदै संवैधानिक प्रत्याभूतिको लागि ऐनिमल नेपाल निरन्तर रुपमा लागिरहने प्रमदा बताउंछिन । प्रमदा भन्छिन, मूलत मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी छ , मानिसमा जनावरप्रतिको क्रुरता जति घटछ, त्यतिनै छिटो नै नेपाली समाजलाई सभ्य बनाउन मद्दत गर्नेछ । पशुपंक्षीलाई गरिने व्यहारका आधारमा राज्य कति सभ्य छ ,नागरिक कति सुस्ंकृत छन भन्ने मानक हामीले स्थापना गर्नुपर्छ , प्रमदाको भनाई छ । रोटरियन प्रमदाको सवै रोटरियनलाई अपिल छ , पशुपँक्षीका लागि एउटा एनिमल हस्पिटल स्थापना गरौं, ऐनिमल एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरौं ,मानवियताको कोणवाट हेरौं । पशुकल्याणमा रोटरीलाई पनि लगाऔं, उनको नम्र निवेदन छ ।